ठूला लगानीका दैनिकको संकट ः ग्राहक बनाउन लोभ्याउँदो चिट्ठा योजना - Jhilko
ठूला लगानीका दैनिकको संकट ः ग्राहक बनाउन लोभ्याउँदो चिट्ठा योजना
११ चैत्र, काठमाडौं । ठूला लगानीका दैनिक पत्रिकाहरूमा नैतिक र व्यावसायिक दुबै किसिमको सङ्कट देखिएको छ । सामान्यतः पत्रकारिताले जनताको हितमा सूचना तथा विचार प्रवाह गर्ने कार्य गर्छ भन्ने बुझाइ हुन्छ । तर, सूचना र विचारको प्रवाहको आफ्नो आदर्शबाट च्युत भएको दैनिक पत्रिकाहरू देखिएका छन् ।
दैनिक पत्रिका चलाउने मिडिया हाउसले भ्रम पार्ने र भौतिक उत्प्रेरणा जगाउने खालका विज्ञापन दिने गरेका छन् । कसैले ग्राहक बन्दा एक किलो सुन उपहार योजना ल्याउँछ भने कसैले करोडपति बनाउने योजनालाई अगाडि बढाइरहेको देखिएको छ ।
मिडिया हाउसहरूले ग्राहक बनाउन यस किसिमको उपहार योजनाका पछाडि कर छल्ने लगायतका योजनाहरू रहेको/नरहेको चर्चा चोक चोकका चिया पसलहरूमा भइरहेका छन् । लागत मूल्यभन्दा धेरै कममा, त्यत्रो उपहार किन केका लागि दिने हो भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठ्ने गरेको छ ।
यस्ता योजना बनाउन पाइन्छ कि पाइदैन ? पाइने भए के के क्राइटेरिया पूरा गर्नुपर्छ ? यो पारदर्शी हो कि आमपाठकलाई भौतिक उत्प्रेरणा जगाएर बिक्री सकटको मोचनका लागि भ्रम मात्र छरिएका हुन ? यो अहिले चर्चा गर्न खोजिएको होइन । यसको छानविन राज्यको निकायले गर्छ ।
ग्राहक उपहार योजनाका पछिका आर्थिक गतिविधिबारे सरकारी नियमन निकायले निगरानी गर्ने भए पनि यसबाट छापा माध्यमका दैनिकहरूको नैतिकता र व्यवसायिकता संकटमा परेको भने उनीहरूको योजनाबाट प्रस्ट छ । ‘जसले पत्रिका पढ्छ करोडपति बन्छ’ यो विज्ञापनबाट पत्रिका किन्नेहरु करोडपति बन्ने अर्थ लाग्छ ।
राजनीतिक क्षेत्रमा आदर्श भत्किएर प्रायः शीर्ष नेताहरु जुन संकटमा छन्, मिडियामा पनि अविश्वास बढेर संकट पैदा भएको छ भन्ने यो द¥हो उदाहरण हो । पत्रिका पढेर सूचना, स्वतन्त्र विश्लेषण, विचार प्राप्त हुन्छ भनेर होइन कि चिट्ठा पाइन्छ भनेर ग्राहक बन्नुपर्ने अवस्था आउनु कर्पाेरेट मिडियाप्रति आमविश्वास गुम्दै जानुको परिणाम हो यो । मिडियाले समाजलाई प्रगतिशीलतामा जान उत्प्रेरणा जगाउने, समाजमा वाच डगको भूमिका खेल्ने भन्दा पनि काला धनवालाको लगानी, तिनको बर्चस्व स्थापित हुँदै गएको अर्थमा सचेत पाठकले लिएका छन् । मिडियाका लागि यो राम्रो संकेत होइन ।
काठमाडौंको न्युरोडमा ‘स्मार्ट पार्किङ’ सेवा सुरु, यस्तो...
सेवाका लिनका लागि ‘केएमसी पार्किङ’ एप एन्ड्रोइड र आइओएस दुवैमा डाउनलोड गर्न सकिने...